खराब प्रदर्शन गरेको भन्दै धोनीकी ५ बर्षीय छोरीलाई बला-त्कार गर्ने ध’म्की, भारतभर हंगामा — Sanchar Kendra
१०फेरि १ महिना देशव्यापी लकडाउनको घोषणा, यी क्षेत्रहरुमा लाग्ने छैन प्रतिबन्ध
खराब प्रदर्शन गरेको भन्दै धोनीकी ५ बर्षीय छोरीलाई बला-त्कार गर्ने ध’म्की, भारतभर हंगामा
काठमाडाैं । आईपिएलमा महेन्द्र सिंह धोनीको प्रदर्शन नराम्रो भएको भन्दै उनकै समर्थकहरु सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौजमा उत्रिएका छन् । तर, केही प्रयोगकर्ताहरुले सामाजिक संस्कार नै गुमाएका छन् । उनीहरुले विवेक गुमाउँदै धोनीविरुद्ध निशाना साँधेका हुन् । एक ट्रोलर्सले धोनीकी पत्नी साक्षीको इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा उनकी ५ वर्षकी छोरी जीवालाई बला-त्कार गर्ने ध’म्की दिएका छन् । अभिनेत्री नगमाले यस विषयको निन्दा गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सोधेकी छिन्,‘यो देशमा के हुँदैछ ?’
नगमाले ट्वीट गरेकी छिन्, ‘एक देशका रुपमा हामी कहाँ खडा छौं ? यो निकै लाजमर्दो छ कि आईीपएलमा केकेआरसँग चेन्नई हारेपछि धोनीकी ५ वर्षकी छोरीलाई बला-त्कारको ध’म्की दिइएको छ । प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशमा यो के हुँदैछ ?’
नगमाले ह्यासट्यागमा बेटी बचाओ–बेटी पढाओ पनि लेखेकी छिन् । कर्नाटककी विधायक सौम्या रेड्डीले पनि घटना दुखद् भएको बताएकी छिन् । ‘हाम्रो देशमा के भइरहेको छ ? हामी कता जाँदैछौं ?’ उनले सोधेकी छिन् । त्यस्तै, महाराष्ट्रस्थित शिवसेनाकी राज्यसभा सांसद् प्रियंका प्रियंका चतुर्वेदीले लेखेकी छिन् – आज सामाजिक सञ्जालको कसरी गलत प्रयोग हुँदैछ । यो यसको ठूलो उदाहरण हो ।’
कोलकाताविरुद्ध १२ बलमा धोनीको ११ रन
यसअघि आईपिएलमा बुधबार कोलकाता नाइट राइडर्सले धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई सुपर किंग्सलाई १ सय ६८ रनको चुनौती दिएको थियो । जवाफमा धोनीको टिमले १ सय ५७ रनमात्रै बनायो । खेलमा धोनीले १२ बलमा केवल ११ रनमात्रै बनाउन सके ।
चेन्नई यस सिजनमा अहिलेसम्म खेलेका ६ मध्ये २ खेल जितेर ४ अंकसहित छैटौं नम्बरमा छ । यस सिजन कोरोनाका कारण आईपिएल युएईमा आयोजना भइरहेको छ, धोनीले आफ्नो परिवारलाई खेल स्थलमा लगेनन् । अघिल्ला वर्षहरुमा धोनीकी पत्नी तथा छोरी पनि आईपिएल हेर्न आउँथे ।
क्रिस गेललाई आईपीएलले तिरायो यति धेरै जरिवाना, के हाे कारण ?
आईपीएलमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र चेन्नई सुपर किङ्स भिड्दै
डिभिलियर्स चम्किएपछि बैंग्लाेरको रोमाञ्चक जित, राजस्थान ७ विकेटले पराजित
आईपीएलमा बैंगलोरको शानदार जित, कोलकता ८२ रनले पराजित
नेपालका चित्रकुमारले तोडे अमेरिकीको विश्व रेकर्ड